Izipho zoSuku loMama oluya kuphumelela | IPhone iindaba
Kwakhona, iqela le-iPhone eyiyo ligqibe kwelokuba likuncede ngale mihla ibalulekileyo. Usuku lukaMama lufika nge-2 kaMeyi, kwaye siqinisekile ukuba Iintyatyambo eziqhelekileyo kunye neetshokholethi zodidi, kodwa umama wakho ufanelwe okungaphezulu kunoko.
Vumela ukuba ukhokelwe zizindululo zethu, sikuphathela izipho ezilungileyo zoSuku loMama ukuze aqhubeke nokuzingca ngawe. Njengesiqhelo, ayisiyiyo yonke into esikubonisayo oya kuthi uyiprinte ikhusi leapile, apha sibheja kuluhlu olulungileyo lweemveliso ezinexabiso elifanelekileyo lemali, ke ungaphoswa yile kwaye uziphawule kancinci.
1 Fumanisa i-home and home automation exhunyiwe
2 Amatyala kunye nezixhobo zezixhobo zakho
3 Isandi kunye nezithethi
4 Izixhobo kunye nezixhobo ezahlukeneyo
Fumanisa i-home and home automation exhunyiwe
Sukuyenza impazamo, ii-clichés zihlala ziyinyani ngokupheleleyo nokuba singazithandi kangakanani, kwaye iyinyani njengetempile ekungekho mntu upheka njengonyoko. Unenkumbulo elungileyo, into ongayifumananga njengelifa, kodwa ayizukulimaza ukubeka okuhle IAmazon Echo Show 5 ngesona siqhelo siQhelekileyo seRisipe. Ukuba akunjalo, uya kuba nakho ukubeka iingoma zakho ozithandayo kwiSpotify ngesithethi sakho. Esi sixhobo simnandi siyathengiswa nge-55 Euro kwiAmazon, Isivumelwano kunzima ukungahoyi kule mihla ikhethekileyo.
Ezinye iimveliso zeAmazon Echo Show esizicebisileyo kumajelo ethu zezi zilandelayo:
I-Amazon Echo Bonisa i-8: Review
I-Amazon Echo (ka-2021)
Nangona kunjalo, ukuba sibheja ngakumbi kwiimveliso ezivela kwinkampani yeCupertino, sele uyazi ukuba encinci kunye neyona nto imnandi yeKhayaPod Mini, yimveliso yee-euro ezingama-99 kuphela Ibe yimpumelelo kwiApple, kangangokuba iye yabeka itrone kwiPod Home yasekhaya.
Amatyala kunye nezixhobo zezixhobo zakho
Awungekhe uphulukane netyala elifanelekileyo le-iPhone yakho emnandi, kule meko u-Elago uhlala ekhetha kuqala, enye yeempawu eziphambili kwimarike ebonelela ngokuzinzileyo, ukhululekile kwaye kutheni ungayitsho, iimveliso ezinesitayile. Kule meko bamkela amaxabiso asezantsi kakhulu kwiindawo ezinje ngeAmazon, Apha eActualidad i-iPhone sivavanye iimeko zayo ezininzi kwaye isiphumo sihlala sihle.
Ezinye izimbozo ezicetyiswayo zezi:
Ukugubungela iMoshi, uphawu olunconyelweyo olusinika isiphumo esimangalisayo.
IMagSafe Duo yenye imveliso enomdla esiye sayivavanya apha kwi-iPhone News kwaye isinike ukusebenza okumangalisayo. Yithi molo ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngale mveliso yahlukileyo kunye nesitayile evela kuApple eya kuvumela umama wakho ukuba ahlawulise i-iPhone kunye neApple Watch ngexesha elinye. Inamaxesha angaphezulu kokulayisha okwaneleyo kwaye nangona sisazi ukuba ixabiso liphezulu, sikuluhlu lweemveliso "zepremiyamu", ngokuqinisekileyo umama wakho akafanelekanga kangako.
Nangona kunjalo, sicebisa umtya olungileyo we iimveliso kunye nezixhobo eya kukuvumela ukuba ugcine ibhetri yezixhobo zakho ubuninzi ngesitayile kunye nokusebenza:
Satechi Trio Ngaphandle kwamacingo: Le tshaja yeSatechi iyakwazi ukutshaja ukuya kwizixhobo ezi-3 ngaxeshanye (Apple Watch, AirPods kunye ne-iPhone) ngesiseko esinye sokutshaja seQi. Inexabiso elinexabiso eliphantsi le- $ 99 kwiAmazon kuphela.
Uphawu lweMoshi Q kunye neLounge Q: Imveliso yokugqibezela ngokupheleleyo kwintengiso, eqinisekiswe yipremiyamu yohlobo olufana noMoshi, ayisiniki nto ngaphantsi kwe-USB-C HUB enezibuko ezimbini ze-USB, i-HDMI, i-RJ45 Ethernet kunye ne-3,5mm AUX Jack yesandi. Ixabiso elikhuphisanayo kwiAmazon kwimeko yeLounge Q ngenkqubo eyenziwe lula.
Isandi kunye nezithethi
Ngoku lixesha lokucebisa isithethi, awunakuphulukana ne-Sonos Roam entsha, imveliso edityaniswe kakuhle umama wakho aya kuba nakho ukuyithatha naphina endlwini kuba ayinazingcingo kwaphela. Ukongeza ukuhambelana neSpotify Connect kunye nabo bonke abancedisi abanjengoAmazon Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, sinazo I-Apple AirPlay 2 kunye neKhayaKit 2, ke iya kulunga ngokugqibeleleyo kwimeko yeApple ukuba yile nto ufuna ukuyenzela umama wakho. Isithethi seprimiyamu esijikeleze i-170 yeedola kwiAmazon, ngokungathandabuzekiyo eye yamnandi.
Ukuba ujonga into enexabiso eliphantsi sinayo Amazon Echo ichaphaza, ukuba ukusuka kuma-euro angama-38 kusinika iziphumo ezingaphezulu kokufanelekileyo, Sinokuthenga nenguqulelo enewotshi encinci kwaye umama wethu angayisebenzisa njengewotshi ye-alamu phakathi kwezinye izinto ezininzi. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yexabiso elinomdla kwimveliso yemali esinokuyifumana.
Ukuba ujonge ii-headphone ezinomgangatho wexabiso / amaxabiso esinawo uKygo Xellence, ii-headphone ezidibeneyo kunye nokucinywa kwengxolo esebenzayo kunye nayo yonke imisebenzi onokucinga ngayo. Basinike enye indlela yokwenyani kwi-AirPods Pro ngexabiso le-120 euros kwiAmazon. Banemakrofoni emnandi ukuze ubenakho ukusebenzisa kubo ukwenza iifowuni zeFoTTime ziqheleke ngolu hlobo. Ngokuqinisekileyo kufuneka ujonge kakuhle le ndlela.
Ezinye iindlela kwinqanaba lefowuni yile:
Isizukulwana sesibini iApple AirPods ngee-euro ezingama-119
I-Huawei Freebuds 4i ngaphantsi kwe-euro ezingama-70
I-Soundpeats Liberty Air 2 Pro ngee-euro ezingama-119 kuphela
Siye sakunikezela ke ngoko ngokudityaniswa okuhle kwemveliso yesandi ejikeleze zonke iimpawu kunye namaxabiso ukuze ukwazi ukuzenzela isigqibo, ngubani owazi kakhulu umama wakho, zeziphi anokuthi azithande kakhulu.
Izixhobo kunye nezixhobo ezahlukeneyo
Ngoku sihamba ngokudityaniswa okuncinci kwezi mveliso ezinokuqaqambisa usuku lwakho kwaye zifumane itekhnoloji ngeyona ndlela intle. Ngokucacileyo siqala nge Uhlobo lweAmazon, I-e-ncwadi edume kakhulu kwintengiso ine-backlight, ikhathalogu yobuyatha kunye nezinto ezininzi ezintsha ezinokuthi I-euro ezingama-89,90 kuphela iya kuvumela umama wakho ukuba abuye lonke ixesha lokufunda elimfaneleyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, iincwadi ezikwikhompyuter ziyindlela enomdla ngakumbi kunenye.
Ewe umama wakho kufanelekile ukuba abeke esweni yonke imisebenzi yakhe, kuba le ndlela ingenakuthelekiswa nanto ngokubhekisele kumgangatho / kwixabiso ngokucacileyo yile Xiaomi Mi Ibhendi 6, ngoku ngaphantsi kwama-50 eros, Iya kukuvumela ukuba ujonge intshukumo yakho, uthathe ithuba lokuzilolonga kwaye ngakumbi ufunde izaziso zakho ngendlela elula nekhawulezayo.
Nangona kunjalo, kucacile ukuba Apple Watch Yimbangi yokubetha kule meko, yiyo loo nto sikubonisa iApple Watch Series 6, iwotshi ebukhali yenkampani yeCupertino enezona zixhobo zininzi kunye noyilo olufanelekileyo ukuza kuthi ga ngoku, yiyo loo nto sihlala sicebisa enye indlela. Nangona kunjalo, Ungayifumana ngaphantsi kwama-euro angama-400 kwi-Amazon yonke imibala.
Izixhobo zokucoca iirobhothi Baye baba yimpumelelo ekhohlakeleyo, sihlalutye kakhulu ngesandla seActualidad Gadget, nangona kunjalo, kule meko kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba zininzi iindidi kwaye ikakhulu amaxabiso awahlukeneyo, sikunika ezinye umdla:
URoborock S6, uluhlu oluphezulu olungaphantsi kwama-euro angama-400 kunye noyilo lwayo kunye nobuntu obukhulu.
IRowenta, uphawu olwaziwayo olunesiqinisekiso, inikezela ngeSmart Force Explorer yayo engaphantsi kwama-200 euros, yiyo loo nto ithathwa njengenye indlela enomdla kakhulu ngokwexabiso lemali.
Sinokukunika ezinye iimveliso "ezahlukeneyo" njengale thermometer yasekhitshini smart Oko kunokuba kuhle kumama wakho kwezi roast zimnandi azilungiselela zona.
Yiyo yonke le nto siye sakwazi ukukunika Kwiindaba ze-iPhone ukuze ufumane esona sipho silungileyo ngoSuku loMama. Njengamaxesha onke Sicebisa ukuba undwendwele itshaneli yethu yeYouTube apho ngokungathandabuzekiyo uya kufumana ubuninzi beemveliso ezinomdla. Thatha ithuba lokubhalisa kwaye usishiye nayiphi na imibuzo onayo malunga neemveliso ezihlalutyiweyo kwibhokisi yezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Yimangalise ngoMhla woMama ngezi zipho